एन्टिबायोटिक खाइरहेको रोगीले रक्सी खाए के हुन्छ ? • Janaboli
प्रायः मानिसहरुको प्रश्न हुन्छ, एन्टिबायोटिक औषधि खाइरहेको मान्छेले रक्सी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन ? कतिपय महिलाहरु पार्टीमा गएका बेला रक्सी नखानुको कारण सोधे भने आफूले एन्टिबायोटिक खाइरहेको बताउँछन् । खासगरी गर्भवती महिलाहरुको यही जवाफ दिने गर्छन् । उनीहरु प्रायः यस्ता पार्टीमा गर्भवती भएको कुरा लुकाउँछन् । त्यसो त कतिपय पुरुषले पनि दिनदिनै रक्सी पिउनबाट जोगिनका लागि औषधि खाइरहेको बताउने गर्छन् । वास्तवमा एन्टिबायोटिक खाइरहेका बेला कुनै गर्भवती महिलाले रक्सी पिउनु हुन्छ कि हुँदैन ? महिला मात्र किन पुरुषले पनि एन्टिबायोटिक खाइरहेका बेला रक्सी भरसक खाँदैनन् । आखिर किन ? केही मानिसहरुको धारणामा रक्सी पिउने व्यक्तिले खाइरहेको औषधिले राम्रोसँग काम गर्दैन । एन्टिबायोटिक खाइरहेका रोगीले रक्सी खायो भने त्यसले नराम्रो असर पु¥याउँछ भन्ने विश्वास छ ।
वास्तविकता त के हो भने चिकित्सकहरु भन्छन्, ‘तपाईं एन्टिबायोटिक पनि खानुस् र रक्सी पनि खानुस् । यसले खासै असर पुर्याउँदैन ।’ यस किसिमको धारणाले मानिसलाई रक्सीबाट टाढै राख्छ । जुन धेरै राम्रो कुरा हो । चिकित्सकहरुले औषधि खाइरहेका बेला रक्सी नखानुस् भन्नुको अर्थ औषधि खान नबिर्सियोस् र समयमै औषधि खाओस् भन्नु हो भन्ने धेरै चिकित्सकको राय छ ।
एन्टिबायोटिक खाँदा रक्सी पनि थप्न मिल्छ । यी दुवैको संगमले खासै असर पु¥याउँदैन । हुन त केही एन्टिबायोटिक खाँदै हुनुहुन्छ भने रक्सी नपिएकै राम्रो । सेफाालोस्पोरिन सेफोटेटान खाँदै हुनुुहुन्छ भने त्यस बेला रक्सी खानु हुँदैन । यसले शरीरलाई नोक्सान त पु¥याउँछ नै यी दुवैको मिश्रणले एसिटल्डिहाइड नामक केमिकल बन्छ । यस केमिकलले तपाईंलाई रिँगटा लाग्ने, उल्टी हुने र अनुहारको चमक बिगार्ने, टाउको दुख्ने, श्वास बढ्ने र मुटुमा पीडा हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । डाइसल्फिरम नामक औषधि खाइरहेका बेला पनि रक्सी पिउनु भयो भने समस्या देखिन्छ । यो औषधि रक्सीको लत छुटाउन प्रयोग हुन्छ । यो औषधि खाइरहेका बेला रक्सी पिएका खण्डमा विविध किसिमका लक्षण देखिन्छन् । ती देखिऊन् भनेर नै रक्सी छुटाउनका लागि कतिपय चिकित्सकहरुले यो औषधि लेखेर दिन्छन् ।
क्लाउडिया हेमन्ड/बिबिसी फ्युचर/शुक्रबार